आधी गाग्री पानी छचल्किन्छ नै - कविन्द्र घिमिरे
माघ २२, २०७५ मनु बिद्राेही
कविन्द्र घिमिरे एकदशकदेखि साहित्यमा कलम चलाइरहनु भएको छ । उहाँले विद्यालयमा पढ्दै कवितायात्रा शुरु गर्नुभएको हो । स्कुल पढ्दा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूबाट थुप्रै पुरस्कार पाउनुभएको छ । साहित्यमा लाग्न प्रेरित गरिरहनुहुने उहाँको हजुरआमा प्रेणाको स्रोत हो । उहाँ कविता, गजल, मुक्तक, हाईकू, कथा र निबन्ध लेख्नुहुन्छ । संयुक्त गजलसङ्ग्रह कैफियत (२०७४) र गजल चौतारी (२०७४) मा उहाँका केही गजल प्रकाशित छन् । गजलकार घिमिरेसंग सारङ्गी न्यूजकालागि मनु विद्राेहीले गरकाे कुराकानी:
_ जागीर गर्छु , प्राय: अफिसको काममा नै ब्यस्त भइन्छ । यसो फुर्सद हुँदा साहित्यक रचना पढ्न तथा लेख्नमा व्यस्त हुन्छु ।
साहित्य के हो ? किन लेख्नुहुन्छ?
_ मेरो विचारमा साहित्य रसयुक्त कल्पना हो । मनको बह हो । अझै भन्नुपर्दा साहित्य शक्ति हो । म अाफ्नो मनलाई आनन्दित बनाउनका लागि लेख्छु ।
एकदशक पहिले र अहिलेको नेपाली साहित्यमा के भिन्नता देख्नु भएको छ ? अहिलेको नेपाली साहित्यको स्थितिबारे कत्तिको सकारात्मक हुनुहुन्छ?
_ पहिले र अहिले को साहित्यमा धेरै भिन्नता देखेको छु ।अहिले साहित्यिक माहोल छ । विभिन्न साहित्यक संस्थाहरूको उदय भएको छ । सामाजिकसञ्जालहरूको प्रयोगमार्फत विभिन्न साहित्यक रचनालाई सजिलै पाठकसम्म पुर्‍याउन सकिएको छ । जे होस् पहिलेभन्दा अहिले साहित्यमा धेरै अवसर देख्छु । नेपाली साहित्यको स्थितीप्रति सकरात्मक छु ।
हाल विकास भएको सूचनाप्रविधिले नेपाली साहित्यलाई कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ?
- वास्तवमा साहित्यलाई गतिशिल बनाउने काम नै सूचनाप्रविधिले गरेको छ । आज नेपालको सुदूर कुनामा बसेको व्यक्तिको भावना संसारको जुनसुकै स्थानको व्यक्तिले पनि साटासाट गर्ने वातावरण को सृजना भएको छ । यसले पक्कै पनि नेपाली साहित्यलाई उचाईमा पुर्‍याएको छ ।
पुरुष लेखकभन्दा महिला लेखकको संख्यामा कमी देखिनु र महिला लेखक पछाडि पर्नुको मुख्य कारण के होला ?
- साहित्य एक किसिमको चेतना हो । मनोभाव पनि हो । र, रुचि । अब महिला भएकै कारण पछाडि परेको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन । मैले त थुप्रै महिलाहरू साहित्यमा अग्रसर भएको पो देखिरहेछु ।
- साहित्य शान्तरूपमा बगिरहने समुन्द्र हो । यो आफ्नो मनोभावबाट उत्पन्न हुन्छ । कसैले बनाएको भरमा साहित्यकार बनिँदैन । नातावाद र कृपावादबाट साहित्यकार बन्छन् भने ती पानीको फोका सरी फुट्छन् । कालान्तरमा अस्तित्वविहीन भएर हराउँछन् ।
साहित्यलाई समाजको ऎना मानिन्छ । कस्ता कस्ता विषयवस्तुमा जोड दिने हो भने समाज परिवर्तनको लागि सहयोग पुग्ला ?
- सही भन्नू भो । साहित्य समाजको एेना नै हो । यसले समाजको यथार्थ चित्रण गर्दछ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि शब्दहरूले विशेष भूमिका खेल्दछ । विकृति र विसंगतिविरुद्ध लेखिएका अक्षरहरू, जीवनका भोगाइहरू, मानवीय संवेदनसिलताका कुराहरूले नै समाजलाई परिवर्तन गर्छ ।
-साहित्यलाई साँघुरो घेरामा राखेर आगन्तुक शब्दको प्रयोग नै गर्नु हुदैन भन्ने मान्यता त म राख्दिन । तर आफ्नो मौलिकपन नै बिर्सने हिसाबले यसको प्रयोग गर्नु चाहिँ ठीक होइन ।
साहित्यको प्रायजसो सबै विधा विवादित बनेको छ यस्तो अवस्थामा साहित्यक्षेत्रमा रुचि भएकाहरूलाई र नवआगन्तुकलाई तपाईंको सुझाव के छ?
- आधी गाग्री पानी छचल्किन्छ भनेजस्तै, भदौरे भेल उर्लेजस्तै, भर्खर दाहेका बहर गोरु भड्केजस्तै साहित्यमा अलिअलि बामे सरेका कुनै कुनै व्यक्तिहरूले चाहिने नचाहिने हल्ला फैलाउँदै विवादित बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । यो पक्कै पनि राम्रो बिषय होइन । यदी कोही साहित्यलाई साँच्चिकै माया गर्छ भने हल्लाको पछि नलागी निरन्तर साधनामा लाग्न अनुरोध गर्दछु ।
अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र भन्न मन लागेको कुरा केही ?
- सबै साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक प्रगतिको शुभकामना ।
मगलवार, माघ २२, २०७५, ०८:०२:००